Cannabisku ma kaa caawin karaa inaad si fiican u barato? 2022
October 21, 2021 Okpara Francis
Cannabisku ma kaa caawin karaa inaad si fiican wax u barato?
Bulsho ay carruurtu ku raad -joogaan inay wax bartaan inay aadaan kulliyadda si ay u yeeshaan mustaqbal wanaagsan, way adkaan kartaa in la dhiirigeliyo inta wax la barayo. Dhammaan casharrada, casharrada guriga, iyo waxyaabo kale oo la xiriira waxbarashada, haynta ayaa ka sii adkaanaysa sidii hore.
In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo aad samayn karto si aad u hesho dhiirrigelin, ardayda kale waxay isku dayayaan xashiishadda. Arday badan ayaa isku dayay sixirka xashiishadda, waxay ka caawisaa inay xoogga saaraan, maskaxdooda dabciyaan oo ay wax qabsadaan.
Horumarka socda ee warshadaha xashiishadda, alaab badan oo soo jiidanaysa ardayda ayaa la iibinayaa. Mid ka mid ah alaabooyinka ugu caansan waa Delta 8 gummies kuwaas oo laga heli karo halkan.
Xashiishadda ayaa aad looga aqbalaa bulshooyinka kala duwan ee adduunka, markaa maxaad u tijaabin xashiishadda si ay kaaga caawiso inaad wax barato?
Sidee Cannabis kuugu caawin kartaa inaad diirada saarto
Haddii ay kugu adag tahay inaad diirada saarto hawlahaaga, hagaajinta niyaddaada waxay noqon kartaa bilow wanaagsan. Xashiishadda waxaa lagu yaqaanaa inay kor u qaaddo niyaddaada oo kaa caawiso inaad si dhakhso leh uga gudubto hawlahaaga.
Inkasta oo xashiishadda ay kaa caawin karto inaad diirada saarto, xashiishka maaha wax kicinaya sidaas darteedna ma keento jitteri. Waa xalka ugu fiican marka la isku dayayo in la helo dhiirigelinta waxbarashada adoo dejinaya maskaxdaada isla markaaba.
Ka sokow ahaanshaha dhiirrigeliyaha niyadda, xashiishadda ayaa sidoo kale leh hanti yaraysa cadaadiska iyadoo hoos u dhigaysa heerarka cortisol. Haddii aad niyadda ku hayso oo aanad dareemin diiqad, way kuu fududaan doontaa inaad wax qabato.
Qaar ayaa laga yaabaa inay yiraahdaan in dhagaxa lagugu tuuraa waxay kaa dhigi kartaa caajisnimo iyo inaadan wax soo saar lahayn laakiin xashiishadda waxay kaa caawineysaa inaad diirada saarto kor u qaadida hal-abuurkaaga.
Sida Xashiishku U Saameeyo Maskaxda
Sida laga soo xigtay daraasad, xashiishadda ayaa awood u leh inay kor u qaaddo xoojinta dopamine maskaxdaada. Isticmaalayaasha xashiishadda muddada-dheer waxay ku yeelan karaan maskaxda hoose ee dopamine marka la barbar dhigo kuwa aan xashiishadda isticmaalin, laakiin xashiishadda ayaa la og yahay inay maskaxda u saameyso siyaabo wanaagsan marka si masuuliyad leh loo isticmaalo.
Daraasado dhowr ah ayaa muujinaya in xashiishadda ay gacan ka geysato soo celinta isku xirnaanta maskaxda oo ay door ka qaadato neurogenesis. Daraasadu waxay muujisay in xashiishadu awood u leedahay inay ka caawiso daaweynta niyad -jabka, laba -cirifoodka, iyo xanuunnada kale ee caafimaadka maskaxda.
Hab-nololeedka xashiishadda ee aan inta badan ka aragno xamaasadleyda sida Snoop Doog waxay noqon kartaa dhiirigelin si aan uga gudubno kulliyadda. Xashiishadda waxaa lagu dari karaa siyaabo badan nolosheena gudaheeda, waxayna keeni kartaa natiijooyin waxtar leh haddii si sax ah loo isticmaalo.
Ma cabtaa kafee ama shaah subax kasta? Ma shaqeysaa dugsiga kadib? Miyaad sigaar cabtaa si aad cadaadiska uga saarto? Cannabis waxa loo isticmaali karaa ku dhawaad ​​wax kasta oo aan samayno.
Noocyada kala duwan ee Isticmaalka
Xashiishadda waxaa lagu heli karaa badeecooyin kala duwan, laga bilaabo saliidaha, cirridka ilaa qalimaanta uumiga, iyo qaar kaloo badan. Cuntada la cuni karo waa mid ka mid ah siyaabaha ugu badan ee loo isticmaalo xashiishadda.
Haddii aad sigaar cabto, waxaa jira sigaar, duubo hore, iyo qalimaan vaping ah oo diyaar ah. Waxyaalahan ayaa xitaa kaa caawin kara inaad joojiso sigaarka haddii aad rabto. Si ka duwan sida tubaakada tubaakada, waxyaabaha xashiishadda ma laha waxyeellooyin.
Wax -barashadu waxay noqon kartaa mid lagu caajiso oo lagu caajiso inay jiraan siyaalo wax looga baran karo madadaalo badan. Haddii aad ka maqan tahay dhiirigelinta oo ay kugu adag tahay inaad diirada saarto hawlaha iyo la tacaalida walaaca, xashiishadda waxay noqon kartaa saaxiibkaa.
Kanaafis karaa kaa caawin inaad si fiican wax u barato oo ka takhalusi waxyaalaha carqaladeeya. Waxay kor u qaadaysaa diiraddaada taas oo ka dhigaysa xashiishadda xalka ugu fiican kuwa raba in wax la qabto inta ay wax baranayaan.
A1 CBD / Gamb / Ciyaar damaanadqaaday
Previous Post:15ka Dugsi Hoose Dhexe ee Ugu Fiican London
Post Next:Sida loo yareeyo Lacag bixinta Amaahda Ardayga